मात्र अस्ति प्रथम मधेश आन्दोलन ताका गृह मन्त्रि ५२ मधेश पुतहरुको हत्यारा कृष्ण सिटौलाले संसदको रोस्ट्रम बाट खुलेर भनेका थिए भाला हान्नेहरुले भाला हाने पछि के हुन्छ भन्ने नसोची हाने. उनको संकेत पूर्ण रुपमा खून का बदला खून नै थियो. आज यी बाहुनवादीहरुले बारा पर्सामा ८ (अनौपचारिक २० भन्दा बढी) जनाको हत्या गरेर उक्त कुरा चरितार्थ गरि छोड़े. राज्यको यो अमानविय हत्या र दमनले धेरै मधेशी युवाहरुलाई पनि बदला कै भावना तर्फ उत्तेजित र प्रोत्साहित गरे आस्चर्य नमाने हुन्छ. आखिर सरकारले जे सिकायो जनताले त्यहि न सिक्ने छन्. धेरै ढिलो हुनु भन्दा अघि प्रधानमन्त्री ले तुरुन्त राजिनामा देउ, जनता संग माफी माग र सबैलाई बराबर को हक अधिकार देउ.
bamdev gautam janajati kans sitaula KP Oli krishna sitaula madhesi madhesi janajati kranti 2015 Sher Bahadur Deuba